Hatramin'ny niorenany dia nifikitra hatrany tamin'ny fanavaozana ny paikadin'ny talenta i Tonglu ary nandray fepetra vaovao hahatratrarana ny fampandrosoana leapfrog. Tonglu dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana "fanatsarana ny fahombiazan'ny fitantanana, ny talenta manamafy orina ny orinasa, ary ny kolontsaina manentana ny orinasa", mampivoatra ny paikady fampidirana talenta ary mampiasa ny fananganana ekipa sangany ho toy ny teboka fanombohana hampiroborobo ny fametrahana ny andrim-panjakana, ny fanamarinana, manam-pahaizana manokana sy fahatanorana fiasa sy fitantanana Mahomby mihazakazaka. Ao amin'ny paikadin'ny talenta, niforona tsikelikely ny tetik'asa «talenta + talenta + teknolojia + fitantanana» mifototra amin'ny tsena sy ny mekanisma momba ny asa ary ny fambolena rafitra mandrisika, manome ny fahafaham-po ny famoronana sy ny antony manosika ny mpiasa rehetra, ary ny fifanarahana amin'ny mpanjifa lehibe. ny Orders an'ny orinasa, fanavaozana ny mari-pahaizana ary fanitarana dia nametraka fototra mafy orina.
Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa maherin'ny 30 i Tonglu, miaraka amin'ny talenta mitambatra avo lenta sy avo lenta; misy matihanina marobe miaraka amina fizarana lehibe, fandrakofana malalaka, ary sosona miavaka. Ny salanisan'ny mpiasa manana mari-pahaizana bakalorea na mihoatra dia 75,6%, ary maro amin'izy ireo no avy amin'ny andrimpanjakana fanta-daza amin'ny fianarana ambony, toa ny Oniversite Hunan, Oniversite Hunan Normal, ary ny Oniversite Yangzhou, miaraka amina tontolon'ny fanabeazana sy attainme matihanina.
Tonglu dia mandray ny mpanjifa ho fotony, miaraka amin'ny vokatra tsara sy ny kalitaon'ny serivisy ho toy ny fifaninanana ifotony, ary andraikitray ny manome ny mpanjifa vokatra iraisan'ny olon-dehibe manara-penitra manara-penitra. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana sy fanavaozana ny maodelim-barotra sy fitantanana dia manohy mampiditra andian-vokatra vaovao izahay. Hatsarao ny fenitry ny serivisy, ampiasao ny maodely ara-barotra vaovao, atambatra ny tombon-tsoa amin'ny kapital, ny fitantanana, ny teknolojia ary ny mpiara-miasa manara-penitra manerantany sy anatiny ary manolo-tena amin'ny fandikana ireo hevitra vaovao sy ny fandikana ireo toetra mampiavaka ny vokatra ho an'ny olon-dehibe fahafinaretana manokana sy ny fahalavorariana. Izy io dia mandray mekanisma fifantina vokatra hentitra, ary mifantina ny vokatra rehetra mifanaraka amin'ny fenitra hentitra mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra avo lenta sy ny tsirony, ary hampifanaraka azy amin'ny traikefa fiantsenana an-tserasera tsara indrindra sy ny serivisy fividianana tsara indrindra.
Eo ambany fitarihan'ny paikady lehibe amin'ny fehin-kibo nasionaly sy ny lalana iray, Tonglu dia hanaraka hatrany ny fomba fivoarana ara-tsiansa sy marin-toerana, miaraka amin'ny mpanjifa ho ivon'ny, ny ekipa ho toy ny teboka fanombohana, ary ny fenitra ho fototra, hampiharana ny fampandrosoana ny orinasa mifototra amin'ny haitao, ekipa ary orinasa matanjaka. Filôzôfia, manamafy ny zava-bita efa misy sy ny fizarana tsena, mifantoka amin'ny fanitarana vaovao ny vokatra ho an'ny olon-dehibe, mifantoka amin'ny fivoarana maintso, ny fampandrosoana ny tontolo iainana ary ny fivoarana an-tsaina, manampy ny mpanjifa hahita lanja, hahatsapa ny fankasitrahana ny lanja sy ny tombam-bidy ary hahatratra ny fampandrosoana mandroso ny orinasa miaraka tombony sy fandresena fandresena. Ny fananganana Tonglu Development ho orinasa kilasy voalohany manana ny lazany eo amin'ny fiaraha-monina sy ny lazany eo amin'ny tsena. "Ny fampandrosoana ihany no afaka miaina;
ny fanavaozana ihany no afaka mitombo; sahy ihany no ho voalohany hamorona ny ho avy ", io no fanapahan-kevitr'i Tonglu hifantoka amin'ny ho avy sy hikatsaka ny fampandrosoana. Ampidiro ny tombony amin'ny loharanon-karena marobe, hampiroborobo ny fiaraha-mientan'ny indostria, raiso ny marika kalitao sy ny fanavaozana ny fitantanana ho toy ny elatra, ampitambatra ny ezaka iraisan'ny mpiasa rehetra, miara-miasa amin'ny sambo iray ihany, miakatra soroka sy midina ary mivoatra ara-tsiansa. Mino izahay fa hanjelanjelatra kokoa ny hoavin'i Tonglu!